Ubukhoboka kunye neetyunithi kwi-Middle Ages
Imbali kunye neNkcubeko Ubomi bemihla ngemihla
Xa ubukhosi bamaRoma baseNtshona buwela ekhulwini le-15, ubukhoboka, obube yingxenye ebalulekileyo yoqoqosho lolawulo, lwaqala ukutshintshwa yi-serfdom (inxalenye ebalulekileyo yoqoqosho lwe- feudal ). Ingqwalasela enkulu igxile kwi-serf. Ingxaki yakhe yayingekho bhetele kunokuba ikhoboka lalinjalo, njengoko wayebophelelwe umhlaba endaweni yomnini ngamnye, kwaye ayikwazanga ukuthengiswa kwenye indawo. Nangona kunjalo, ubukhoboka abuzange buhambe.
Indlela Amakhoboka Ayenjiwe ngayo kwaye athengiswa
Kwisigaba sokuqala seMinyaka Ephakathi, amakhoboka angatholakala kwiindawo ezininzi, phakathi kwabo iCymry eWales naseAnglo-Saxon eNgilani. AmaSlav aseYurophu esekuhlaleni ayehlala athathwe aze athengiswe ebukhosini, ngokuqhelekileyo ziintlanga zaseSlavonic. Amagosa ayaziwa ukuba agcine izigqila kwaye wayekholelwa ukuba ukubeka inkululeko yekhoboka kwakuyisenzo sokuhlonela uThixo. AmaKristu ayenayo, athenge, kwaye athengisa amakhoboka, njengoko kuboniswa ngolu hlobo lulandelayo:
Xa uMbhishophu waseLe Mans uthumele indawo enkulu kwi-Abbey yaseSt. Vincent ngo-572, iikhoboka ezili-10 zahamba nazo.
Ngekhulu le sixhenxe, u-Saint u-Eloi ocebile wathenga izigqila zaseBrithani naseSaxon kwiibethi ezingama-50 kunye ne-100 ukuze akhulule.
Intsebenziswano phakathi kwe-Ermedruda yaseMilan, kunye nomninimzi ogama linguTotone, lirekhoda intengo ye-12 entsha yegolide ye-solidi yenkwenkwe yamakhoboka (ebizwa ngokuba "yile" kwirekhodi). I-solidi elishumi elinesibini yayingaphantsi kweendleko zehashe.
Ekuqaleni kwekhulu le-9, i-Abbey yaseSt. Germain des Prés yabhala i-25 yabanini-278 abanamakhoboka.
Kwintlanzi ekupheleni kweAvignon Papacy , i-Florentines yayingene ekuvukeni kumpapa. UGregory XI wagxotha ama-Florentines waza wabayalela ukuba abekhoboka apho bekuthiwa kuthathwe khona.
Ngo-1488, uKumkani uFrdinand wathumela ama-100 ama-Moor slaves kuPapa Innocent VIII, obanikezela ngezipho kubakalinali bakhe nakweminye inkundla engabonakaliyo.
Amakhoboka amabhinqa athathwa emva kokuwa kweCapua ngowe-1501 athengiswa eRoma.
Izizathu Ezibangelwa Ubukhoboka kwiMinyaka Ephakathi
Ukuziphatha kweCawa yamaKatolika ngokubhekiselele kubukhoboka kwi-Middle Ages kubonakala kunzima ukuyiqonda namhlanje. Ngelixa iSonto liphumelele ekukhuseleni amalungelo kunye nenhlalakahle yamakhoboka, akukho nzame eyenziwe yokukhupha iziko.
Esinye isizathu siqoqosho. Ubukhoboka besibe sisiseko soqoqosho oluvakalayo kwiinkulungwane eRoma, kwaye lahla njengoko isantya senyuka kancane. Nangona kunjalo, yavuka kwakhona xa i- Black Death ikhupha iYurophu, iyanciphisa kakhulu inani labantu be-serfs kwaye yakha isidingo sokwenza umsebenzi onyanzelekileyo.
Esinye isizathu kukuba ubukhoboka bebuyinkqubo yobomi ngeenkulungwane, ngokunjalo. Ukuphelisa into ebaluleke kakhulu kulo lonke uluntu kuya kuba malunga nokuphelisa ukusebenzisa iifama zokuhamba.
UbuKristu kunye neMigaqo yoBakhoboka
UbuKristu buye besasazeka njengengxenye yomlilo ngenxa yokuba yanikela ubomi emva kokufa epharadesi noYise osezulwini. Ifilosofi yayikukuba ubomi bebubi, ukungabi nabulungisa kwakukho yonke indawo, izifo zabulawa ngokungahambelani, kwaye intle yafa esemncinci xa ububi bukhula. Ubomi emhlabeni kwakungekho bubuhle, kodwa ubomi emva kokufa bekunyanisekile : izinto ezilungileyo zavuzwa ezulwini yaye ububi behlwayelwa esihogweni.
Ifilosofi ngamanye amaxesha inokukhokelela kwisimo sengqondo sokuyeka ukungabi nabulungisa kwintlalo, nangona kunjalo, njengokuba kunjalo kwi-Saint Eloi enhle, ngokuqinisekileyo ayisoloko ihlala. UbuKristu babenefuthe lokunyusa ebukhosini.
Impucuko yeNtshona kunye nokuzalwa Kwinqanaba
Mhlawumbi imbono yehlabathi yengqondo ephakathi ingachaza into eninzi. Inkululeko kunye nenkululeko ngamalungelo angundoqo kwimpumelelo yeNtshona Koloni. Ukuhamba okuphezulu kunokwenzeka ukuba wonke umntu waseMelika namhlanje. La malungelo aphumelele emva kweminyaka emzabalazo, ukuchithwa kwegazi kunye nemfazwe ngqo. Ziyimiqondo yangaphandle kwelizwe laseYurophu, elaliqheleke kuluntu oluhle kakhulu.
Umntu ngamnye wazalwa kwinqanaba elithile kwaye eklasini, nokuba yindoda enamandla okanye iindawo ezininzi ezingenamandla, zanikela ngokukhetha okuncinci kunye nemisebenzi eqinile.
Amadoda angaba ngamaqhawe, abalimi, okanye iingcweti ezifana nooyise okanye bajoyine iCawa njengama-monks okanye ababingeleli. Abasetyhini babeza kutshata baze babe yipropati yabayeni babo, endaweni yepropati yooyise, okanye babe ngabafundisi. Kwakukho umlinganiselo othile wokuguquguquka kwiklasi nganye kunye nokuzikhethela.
Ngamanye amaxesha, ingozi yokuzalwa okanye intando engavamile ingamnceda umntu atyeke kwikhondo lexesha eliphakathi. Uninzi lwabantu abaphakathi bekungayi kubona le meko njengemithintelo njengathi namhlanje.
Ubukhoboka kunye neSerfdom kwiMinyaka Ephakathi kunye noMarc Bloch; liguqulelwe yi-WR Bee r
Ubukhoboka kwi-Germanic Society Phakathi neMinyaka Ephakathi phakathi kukaAgnes Mathilde Wergeland
Ubomi kwi-Medieval Times ngo-Marjorie Rowling
Imbali Medren, uMelissa Snell, 1998-2017
Umsebenzi kunye noLutsha kwi-Middle Ages
Ukubaluleka koBantwana kwi-Middle Ages
Indlela iPorridge eya kuba ngayo
I-Infrared RCs Work?
UkuPhuhliswa koLuntu oluPhambili kwiDelphi
Izinto Ezifanele Uzazi Ngomlilo Ophuhliweyo 2014 Harley-Davidsons
I-Kentucky enkulu kakhulu iDerby Long Shots
I-Yamas ne-Niyamas yama-Hindu